Xulka Banaadir oo hantay guusha koobka 18-aad ee gobollada Somaliya, 1-0 kaga badiyey xulka Bari. – Radio Daljir
Xulka Banaadir oo hantay guusha koobka 18-aad ee gobollada Somaliya, 1-0 kaga badiyey xulka Bari.
Garowe, Dec 31 – Xulka kubadda cagta ee gobolka Banaadir ayaa galabta mulkiyey koobkii 18-aad ee loo qabtay gobollada Soomaaliya, kaddib markii ciyaartii kamadanbaysta ahayd ee galabta ay 1-0 uga guulaysteen xulka gobolka Bari.
Ciyaartu markii ay dhammaatay ayaa hal mar sacab iyo sawaxan qaylo huwan ay afka furteen taageerayaasha xulka gobolka Banaadir, halka ciyaaryahannada isla Banaadirna ay orod iyo damaashaad farxadeed ku dhaxmareen qaybaha kala duwan ee garoonka Mire Awaare, iyagoo mid mid u gacan qaaday kumanaan taageerayaashooda ah.
Ciyaartooyga gobolka Bari ayaa iyana la arkayey iyagoo dhax-yuurura bartamaha garoonka kaddib markkii ay waayeen hankoodii ahaa in ay kor u qaadaan koobka qalinka ah ee loo dhigay tartanka ciyaaraha 18-aad ee gobollada Soomaaliya.
Isla markii ay soo dhammaadtay ciyaartii fiinaalaha ahayd, waxaa garoonka Mire Awaare ka bilaabatay Xaflad aad u ballaaran oo damaashaad ah, taas oo kooxda Baambayda iyo fanaaniintu ay ku muujiyeen dareen farxad huwan, iyadoo madadaalo kaddibna la bilaabay munaasabadda wareejinta koobka iyo billadaha kala duwan
Munaasbaddaan billadaha lagu kala guddoomayo waxaa ku sugan m/weynaha dawladda Puntland Dr C/raxmaan Sh Maxamed Faroole, inta badan golaha wasiirrada iyo mudanayaasha baarlamaanka Puntland, madaxda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, halyey-yo magac iyo sumcad weyn ku leh Soomaaliya iyo caalamkaba kuwaasi oo Puntland u ymid ka qaybgalka iyo daawashada ciyaaraha gobollada Soomaaliya ee galabta soo dhammaaday.
M/weynaha dawladda Puntland iyo madaxada kale Puntland iyo kuwa xiriirka Soomaaliya ayaa mid mid u gacan qaaday ciyaartooyada gobollada Bari iyo Banaadir ee maanta kala hantay koobka, waxaana si toos ah loo bilaabay in la guddoonsiiyo koobka iyo billadaha kale ee ay ku kala guulaysteen.
Xulka gobolka Banaadir oo qaaday koobka 18-aad ee gobollada Soomaaliya waxaa si rasmi ah loo guddoonsiiyey koobkii iyo lacag shallin Soomaali ah oo gaaraysay illaa 30 milyan.
Xulka gobolka Bari oo galay kaalinta 2-aad tartanka ciyaaraha waxaa iyana si guud loo guddoonsiiyey 15 milyan oo shallin Soomaali, taas oo qayb ka ah abaal-marinta loogu talo galay.
Xulka gobolka Nugaal ayaa isna galay kaalinta 3-aad ee ciyaaraha gobollada Soomaaliya kaddib markii maanta galinkii hore ay 3-1 kaga kaga badiyeen xulka gobolka J/hoose, waxaana iyana galabta la guddoonsiiyey lacag dhan 10 milyan oo shallin Soomaali ah.
Dhanka kala iyana waxaa jira billado kala duwan oo si gaar gaar ah loogu qorsheeyey ciyaaryahannada kala duwan ee ka socday 15-ka gobolka ee ka tirsan gobollada Soomaaliya, iyo sidoo kala xulalka kala duwan.
Haddaba habka loo qorsheeyey billadaha ciyaaryahannada iyo kooxaha waa sidaan:
1. Billadda xulka ugu ciyaarta wanaagsanaa,
2. Billadda xulka ugu edebta iyo akhlaaqda badnaa,
3. Billadda ciyaaryahanka ugu ciyaarta fiicnaa,
4. Billadda ciyaaryahanka ugu edebta fiicnaa,
5. Billadda ciyaaryahanka ugu goolasha badan,
6. Billadda ciyaaryahankii dhaliyey goolkii 1-aad.
Xilligaan waxaa lagu guda-jiraan, kana socda garoonka Mire Awaare ee magaalada Garoowe, bixinta billadaha kala duwan oo loogu talo galay koobka 18-aad ee gobollada Soomaaliya, kuwaasi oo la kala guddoonsiinayo kooxaha iyo ciyaaryahannada.
Kasokow xaladda billadaha waxaa iyana jira qorshayaal dabaal-deg ah oo lagu weynaynayo dhammaadka koobka 18-aad, kuwaasi oo ay suurtogal tahay in ay sameeyaan hay?adaha dawladda iyo hay?addo kale oo si gaar ah loo leeyahay, waxaana loogu talo galay in lagu soo dhaweeyey xulalka kala duwan ee ka yimid gobollada Soomaaliya, si loo tuso in ay joogaan gurigoodii hooyo.
Qabsoomidda koobka gobollada Soomaaliya ee ay marti galisay dawladda Puntland waxaa uu dawladda iyo dadka reer Puntland-ba u soo hoyisay sumcad iyo sansaan wanaagsan oo dhinacyo badan iskugu jirta, iyadoo isku keennidda gobollada kala duwan loo arko in ay gun-dhig u tahay nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya.
Warbaahinta ka hawlgasha Puntland ayaa door lama illaawaan ah ka ciyaartay baahinta ciyaaraha gobollada muddadii ay socdeen, waxaana idaacadda Daljir ay Istuudyo kumeel gaar ah ka samaysay garoonka Mire Awaare ee magaalada Garoowe si ay dhagaystayaasheeda uga baahi-tirto la socodka ciyaaraha gobollada.
Dhanka kale idaacadda Daljir iyo wasaaradda warfaafinta Puntland oo iskaashana ayaa wada qorshe shahaado sharafyo lagu guddoonsiinayo xarumaha warbaahinta iyo shaqsiyaadka kaalinta lama illaawaanka ah ka ciyaaray tabinta ciyaaraha gobollada.
Haddaba Haddii dib loo milicsado muddadii 16-ka maalmood ahayd ee ciyaaraha gobolladu ka socdeen garoonka kubadda cagta ee Mire Awaare, waxaa ay ku bilawdeen jawi aad u wanaagsan iyo soodhaweyn farxadeed oo aad ballaran, waxaana ay galabta ku soo dhammaadtay Jawi deggan oo ka dhawrsan ceeb iyo carqalad intaba.
Garowe, Dec 31 – Qaybtii hore ee ciyaarta kama danbaysata ah ee u dhaxaysay gobollada Bari iyo Banaadir, ayaa hadda soo gabagabawday, waxaana ay ku soo idlaatay hal gool oo ay la yimaadeen xulka gobolka Banaadir, halka xulka gobolka Bari-na aysan wax gool ah la imaanin.
Ciyaarta fiinaalaha ah ee koobka 18-aad ee gobollada Soomaaliya ayna ku baratamayaan gobollada Bari iyo Banaadir, ayaa si xiiso badan uga socota garoonka kubadda cagta ee Mire Awaare ee magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
Ciyaartaan oo ah middii ugu daawadayaasha badnayd ee dhacda tan iyo markii 15-kii bishaan December ay si rasmi ah u bilawdeen tartanka 18-aad ee ciyaaraha gobollada Soomaaliya ayaa haddana dhanka kale waxaa daawanaya taageerashaadii ugu badnaa ee abid iskugu yimaada garoonkla kubadda cagta ee Mire Awaare.
Sarqanta, sacabka iyo sawaxanka taageerayaasha labada gobol ee Bari iyo Banaadir ayaa si weyn u hareeyey dhammaanba xaafadaha ka ag-dhaw garoonka kubadda cagta ee Mire Awaare.
Madaxda kala duwan dawladda Puntland, madaxda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, maamullada gobollada Bari iyo Banaadir, mas?uuliyiin kala duwan oo ka kala yimd gobollada Puntland iyo kuwa Soomaaliya, halyey-yo magac weyn ku leh ciyaaraha Soomaaliya iyo dad badan oo magac weyn ku leh Soomaaliya ayaa galabta si toos ah u daawanaya ciyaarta fiinaalaha ah ee loogu tartamayo koobka 18-aad ee gobolllada Soomaaliya.
Ciyaartaan oo bilaabatay 2:40PM ayaa markii ay socotay wax ka yar 5daqiiqo xulka gobolka Banaadir waxaa u suurtogashay in ay shabaqa gobolka Bari ay ku hubsadaan kubad si heer sare ah looga soo shaqeeyey, waxaana qaybtii hore ee ciyaartu hadda ku soo gabagabawday 1-0 guushu ku raacday gobolka Banaadir.
Akhristayaal daqiiqad walba waxaan idin soo gaarsiinaynaa hadba meesha ciyaaruhu ay marayaan.
Ciyaartii fiinaalka oo bilaaabatay & garoonka Mire Awaare oo ilyartu is qabatay.
Garowe, Dec 31 – Ciyaartii Fiinaalka ee ay isugu soo hareen gobolada Banaadir iyo Bari ayaa goor dhawayd ka bilaabatay garoonka Mire Awaare ee magaalada Garoowe kaasi oo ay ku suganyihiin daawayaashii ugu tirade
badnaa ee ka soo qaybgala intii uu socday tartanka 18aad ee gobolada Somaliya oo 15-kii bishan ka furmay Garoowe.
Waxaa garoonka fadhiya madax fara badan oo uu ku jiro madaxweynaha PL Dr, Faroole, xubno ka tirsan golaha wasiirada, golaha wakiilada, xiriirka kubadda cagta somaliya iyo marti sharaf kale. Sidoo kala waxaa ku sugan garoonka guddoomiyeyaasha gobolada Bari v Banaadir.
Amniga ayaa si wayn loo adkeeyey waxaana la jaray isgaarsiinta GSM-ka ama mobile-ka balse idaacadda Daljir ayaa si toos ah u tabinaysa ciyaarta iyadoo ay taasi fursad u tahay malaayiin qof oo ku sugan deegaana laga dhagaysto Daljir.
Ciyaarta ayaa socota muddo daqiiqado ah waxaa gool leh xulka gobolka Banaadir.
Akhristayaasha mareegta Daljirna waxaan ugu bishaaraynaynaa inaan hadba u soo gudbin doonno meesha ciyaartu ay marayso.
Axmed Sh. Maxamed ‘Tallman’,